Diamonds Divine - မြင့်မြတ်သောရတနာအိပ်မက်
ဧပြီလ 11, 2017
Apollo နှင့် Artemis စိန်များသည် Sotheby's Geneva၊ ခမ်းနားသောရတနာများနှင့် Noble Jewel များ၊ မေလ ၂၀၁၇
Sotheby's ဂျီနီဗာတွင်ပြုလုပ်မည့်လာမည့်အံ့ဖွယ်ရတနာနှင့် Noble Jewels လေလံပွဲတွင်ထူးခြားသောစိန်နှစ်လုံးကိုရောင်းချလိမ့်မည်။ ဘုရား၏ဘုံမှဖြောင့်။
စတီတန်အမွှာနှစ်လုံးသည်လီတို၏အမွှာသားများကဲ့သို့သော Titans Coeus နှင့် Phoebe တို့၏သမီးများဖြစ်သည်။ Zeus နှင့်ပေါင်းသင်းပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ရာ Artemis နှင့် Apollo တို့ကမိန်းကလေးနှင့်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်စိန်များ၏ခရစ်: Apollo အပြာရောင် နှင့် Artemis ပန်းရောင်.
လာမယ့်နှစ်မှာဒေါ်လာ ၆၈ သန်းအထိရရှိနိုင်မယ့်သစ်တော်သီးနှစ်မျိုးပါတဲ့စိန်နှစ်ပွင့် ခမ်းနားရတနာနှင့် Noble ရတနာလေလံ လာမယ့်မေလ 16 Sotheby's ဂျီနီဗာမှာ။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်နှစ်ခုထူးခြားတဲ့ဘဏ္ာကို, သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုပေးထားသော, အနည်းကိန်းစာရေးတံအဖြစ်သီးခြားစီကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုအဆိုပါ Apollo အပြာရောင် ၏ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ $ 38-50 သန်း, ပြီးနောက် Artemis ပန်းရောင် အကြား $ 12.5-18 သန်း.
လန်ဒန်၊ အင်္ဂလန် - 10ပြီ ၁၀ - Apollo နှင့် Artemis Diamonds ကိုလေလံတင်ရောင်းချမည့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးနားကြပ်များကိုလန်ဒန်၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ otheပြီ ၁၀ ရက်၊ Sotheby's တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၁၄.၅၄ ကာရက်ရှိ Fancy Vivid အပြာရောင်စိန်နှင့် ၁၆- ကာရက်ရှိ Fancy Intense Pink စိန်များကိုမေလ ၁၆ ရက်၊ ဂျနီဗာတွင်ပြုလုပ်သည့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်နိုဘယ်ရတနာများရောင်းချခြင်းတွင်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ - ဒေါ်လာ ၇၀ သန်းဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ Sotheby's အတွက် Tristan Fewings / Getty Images ဖြင့်)
အဆိုပါ Apollo အပြာရောင် အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဖန်စီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအပြာရောင် GIA (အမေရိက၏ Gemological Institute) မှလည်းကောင်း၊ 14.54 ကာရက်, အ Apollo အပြာရောင်သည် အကြီးဆုံးပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိသောဖန်စီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအပြာရောင် စိန် လေလံတင်မှာကမ်းလှမ်းခံရဖို့အစဉ်အဆက်။
GIA မှ Apollo အပြာရောင်သည်လည်းဖြစ်သည် IIb အမျိုးအစား - စိန်အားလုံး၏တစ်ရာခိုင်နှုန်း၏တစ်ဝက်အောက်သာပါဝင်သောအုပ်စု။
အဆိုပါ Artemis ပန်းရောင် ၎င်း၏နှင့်အတူအမှန်တကယ်ချိုမြိန်ရတနာဖြစ်၏ ပန်းရောင်ပြင်းထန်သောပန်းရောင် အရူး။ Apollo အပြာရောင်နှင့်ကိုက်ညီရန်နှင့် ၄ င်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်အရောင်အားမြှင့်တင်ရန်အတွက် ၁၆ ကာရက်ရှိသစ်တော်သီးပုံဖြတ်တောက်ထားသည်။
GIA သည် Artemis ပန်းရောင်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည် IIa အမျိုးအစား"အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့အမျိုးအစားအများဆုံးဓာတုဗေဒစင်ကြယ်သောအမျိုးအစားစိန်၏ "မကြာခဏခြွင်းချက် optical ပွင့်လင်းရှိသည်။"
၏စကားများတွင် David BennetSotheby ၏နိုင်ငံတကာရတနာဌာနဥက္ကJew္ဌ၊
Apollo နှင့် Artemis စိန်များသည်ဂျီနီဗာရှိကျွန်ုပ်တို့၏မေလရောင်းရငွေ၏ကြယ်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤလက်ရာမြောက်လှပသောစိန်များသည်အလွန်ရှားပါးပြီးတစ်ခုချင်းစီသည်ကိုယ်ပိုင်ကျောက်တုံးများဖြစ်သည်။ အတူတူ, နားကပ်တရံအဖြစ်, သူတို့ကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကို Apollo and Artemis လို့နာမည်ပေးပြီးအင်အားကြီးပြီးလှပတဲ့အင်မတန်ကြီးမားလှတဲ့အင်မတန်ညီညွတ်တဲ့ဂရိနတ်ဘုရားများအနက်အစ်မလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားသောစိန်များဖြစ်ပြီးထူးခြားသောတည်ရှိမှုနှင့် Sotheby's ကိုမေလတွင်လေလံတင်ရောင်းချရန်ရွေးချယ်ခံရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူကြသည်။ ” CC
Tags:လေလံ • အပြာရောင်စိန် • ဂျီနီဗာ • ခမ်းနားနှင့် Noble ရတနာ • ပန်းရောင်စိန် • Sotheby ရဲ့
မှတ်ချက်0ခုစိန်မြင့်မြင့်မြတ်သော"